प्रेम गरेर भागेर प्रेमीसँग विबाह गरेकी युवतीले नौ महिनाको छोरीकी छोरी छाडेर फेरी अर्कैसँग हिँडिन् – Tufan Media News
प्रेम गरेर भागेर प्रेमीसँग विबाह गरेकी युवतीले नौ महिनाको छोरीकी छोरी छाडेर फेरी अर्कैसँग हिँडिन्
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार १७:३२
नौ महिनाको सानीछो डेर आमा घर बाट भा गि न। प्रेम बिबाह गरेर भागेको जोडी २ बर्ष न पुग्दै छुटिन पुग्यो। आमाको काखमा रमाउने ,काख मै निदाउने छोरीको के गल्ति थियो होला र ? श्रीमान भन्छन अरुमा कम भए पनि लाउन, खान मा कमि थिएन । राम्रै होस् जहाँ गए पनि खुसि नै रहोस भन्दै श्रीमानले दुख बेसाए ।
नौ महिनाको यति सानो छोरी जस्ले आमानै चिन्दैन त्यहि छोरिलाई छो’डेर आमा घरबाट भा’गिन् । प्रेम बिवाह गरेको जोडि दुई बर्षमै अन्ततः छुट्टिन पुग्यो। आमाको काखमा रमाउने आमाकै काखमा निदाउने यी नौ बर्षिय छोरिको के नै ग’ल्ति थियो होला र ? श्रिमान (दिपेन्द्र बलामि) बताउछन् कि लाउन खानको कमि त थिएन तर त्यो भन्दा बढि चै थिएन पनि मैले दिन पनि सकिन ,जहाँ गएकि छौ तिमी खुसि हुनु भन्छन् श्रिमान् ,बि’चरा ।